Izindaba - IGanzhou Municipal People's Congress Research Group ukuvakashela ukuhlolwa kwezempilo e-United States
IGanzhou Municipal People's Congress Research Group ukuvakashela ukuhlolwa kwezokwelapha e-United States
NgoSepthemba 9,2020, abaholi beqembu locwaningo leGanzhou Municipal People's Congress bavakashela futhi bahlola inkampani. Abaholi benkampani benze isingeniso esiningiliziwe kubaholi bedolobha, futhi bahola abaholi bethimba ukuthi bangene bangene ngaphakathi ehhovisi, indawo yesampula yokubonisa, indawo yokusebenzela yokuhlanza, ilabhorethri, indawo yokugcina impahla eqediwe, njll. Ukuqonda okuningiliziwe kwezokwelapha zaseMelika ukuphathwa kwabasebenzi, ukukhiqizwa okulinganiselwe, ikhwalithi yomkhiqizo nokuhamba komsebenzi.
Endaweni yehhovisi, abaholi beqembu locwaningo bayayiqonda inqubo yentuthuko yenkampani, izinhlelo ezahlukahlukene zokuphatha nokuhlela kwesikhathi esizayo kanye nokuqondiswa kwamasu, futhi banikeza iziphakamiso nemibono ebalulekile kulokhu. Siyethemba ukuthi ukwelashwa kwaseMelika kungenza umsebenzi omuhle ngokuzayo futhi kudale "impilo ezayo". Namathela kuzimpawu zomhlaba wonke, zobungcweti zentuthuko. Ngemuva kwalokho, ngaphansi kobuholi bukaChen, weza ekilasini lethu lokuzihlanza ngaphandle kothuli ukuze kuhlolwe. U-Chen uchaze yonke inqubo yokukhiqiza nenqubo yokukhiqiza kubaholi beqembu locwaningo, futhi wanikeza imvume enkulu enqubweni yokukhiqiza nekhwalithi yomkhiqizo. Abaholi beqembu elibanzi nelocwaningo bacabanga. Ngaphansi kobuholi bomqondisi wezokukhiqiza, saqhubeka nokuvakashela indawo yokugcina impahla eluhlaza, indawo yokupakisha, indawo yokuhlanza inzalo kanye neworkshop yokuhlaziya, abaholi babona ukuthi yini inqubo nokuhlolwa okuqinile kwemikhiqizo.
Ngemuva kokuvakashela i-workshop, abaholi bamaqembu ocwaningo baqinisekisile futhi baqinisekisa imikhiqizo yezokwelapha yaseMelika. IGanzhou Beauty Quotient Medical Technology Co., Ltd.iyimboni yokwesekwa nokusekelwa eGanzhou City, kepha futhi iyunithi eliqokiwe lokuthengwa kwemikhiqizo yedivayisi yezokwelapha edolobheni lethu. Abaholi beqembu elicwaningayo banethemba lokuthi osomabhizinisi baseMelika bazothuthukisa ngamandla ukuqamba okuzimele, bandise utshalomali lwe-R & D, bathuthukise ikhono labo lokuzimela elizimele, futhi banake ukwakhiwa, ukuvikelwa kanye nokusetshenziswa kwamalungelo ezinto ezizimele zobuhlakani. Ngaphambi kokuphela kokuhlolwa, abaholi bashintshisane ngemibono noGeneral Chen wosomabhizinisi baseMelika, futhi banethemba lokuthi osomabhizinisi baseMelika bazoqhubeka nokukhulisa amandla aphelele amabhizinisi, badlale ngezinzuzo zabo, bathuthukise isikhundla sabo embonini, bathuthukise ukuthuthukiswa komnotho wesifunda futhi ngikwazi ukwenza impumelelo engcono embonini yezokwelapha.